यी फिल्म, जसले कोरोना भाइरसजस्तै संक्रमणको कथा भन्छन् ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/यी फिल्म, जसले कोरोना भाइरसजस्तै संक्रमणको कथा भन्छन् !
काठमाडौं – कोरोना भाइरसका कारण संसारभर संक्रमणको कथा प्रस्तुत गरिएका फिल्म दर्शकले हेर्न थालेका छन् । कोरोना भाइरस फैलिने डरले सरकारले लकडाउन गरेको छ । दर्शकले पनि त्यस्तै प्रकृतिका फिल्महरु हरिरहेका छन् ।विश्वमा बनेका केही त्यस्ता चलचित्र पनि छन्, जसले संक्रमणको समयको कथा भनेका छन् । यहाँ केही त्यस्तै फिल्मको चर्चा गरिन्छः
क्वारेन्टाइन : सन् २००७ मा बनेको स्पेनिस हरर फिल्मको रिमेक यो फिल्ममा एक अनौठो भाइरसका कारण मान्छेले ज्यान गुमाएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएको देखाइएको छ ।एक भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको हुन्छ । भवनमा एक रिपोर्टर र क्यामेरामेन पनि थुनिएको देखाइन्छ ।
टुभेल मंकिज (१९९५) : सन् १९९५ मा बनेको यो फिल्ममा मानवनिर्मित भाइरसले संसारमा रोग फैलाएको र मानवजाति नै नष्ट भएको देखाइएको छ । फिल्ममा ब्रोस विल्स, ब्राड पिट लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
कन्टाजियन : चारैतिर एउटा डरलाग्दो रोग फैलिएपछि अवस्थालाई फिल्ममा देखाइएको छ । अमेरिकाले त्यसको फैलावट रोक्न गरेको प्रयास र सफलता फिल्ममा देखाइएको छ ।
रेसिडेन्ट इभिल (२००२) : यो फिल्म पनि भाइरस र एन्टिभाइरसको कथामै बनाइएको छ । फिल्ममा एक सैनिक फोर्स एक भाइरससँग लडेको देखाइएको छ । अम्रेला कर्पोरेशनको जैविक हतियारसम्बन्धी बनाइएको यो फिल्ममा ६ वटा फिल्म फेन्चाइज लिएर बनाइएको छ ।
२८ डेज लेटर :यो फिल्ममा एक भाइरसले अमेरिकाको देशलाई विनाश गरेको देखाइएको छ । २८ दिनपछि बचेका मान्छेहरुले कसरी परिस्थितिको सामना गर्छन् भन्ने यो फिल्ममा हेर्न सकिन्छ ।
डाउन अफ डेड (२००४): यो फिल्म सन् १९७८ मा बनेको फिल्मको रिमेक हो । फिल्ममा संक्रमण भएका मान्छेले संक्रमणमा नपरेका मान्छेलाई खाने गरेको कथा देखाइएको छ ।
आइ एम लिजेन्ड (२००७): यो फिल्ममा एक रोगले धेरैको ज्यान जान्छ । उक्त रोगले जनावरलाई पनि छोड्दैन । रोगले आक्रमण गरेकाहरु राक्षस बन्छन् ।
द ह्याप्पेनिङ : सन् २००८ मा प्रदर्शनमा आएको फिल्म एक भाइरसबाट जोगिन एक परिवारले गरेको संघर्ष देखाइएको छ । हावामा फैलिएको उक्त विषले गर्दा कति मान्छे मर्छन् ।
डुम्स डे : सन् २००८ मा रिलिज भएको फिल्म डुम्से डेमा एक भाइरसले कसरी संक्रमण फैलाउँछ भन्ने देखाइएको छ ।
प्रफेक्ट सिन :’ सन् २०११ को यो फिल्ममा महिला सेफ र लजालु वैज्ञानिकको प्रेमकथा छ । उनीहरुमा भाइरसले असर गरेको फिल्ममा देखाइएको छ ।
वल्ड वार जेड : सन् २०१३ को यो फिल्ममा एक भाइरसका कारण मान्छेले मान्छे खाने र त्यसबाट बच्न गरिएको संघर्ष देखाइएको छ ।
फ्लू : सन् २०१३ को यो फिल्ममा पनि एक भाइरसको कथा देखाइएको छ । कोरियाको एक शहरमा महामारी फैलिएपछिको अवस्था फिल्ममा देखाइएको छ ।
भाइरस : सन् २०११ को यो फिल्म मलायलम फिल्म हो । फिल्ममा भारतको केरलामा एक डरलाग्दो भाइरस फैलिन्छ । जसलाई रोक्न मान्छेहरुले गरेको संघर्षको कथा देखाइएको छ ।
ट्रेन टु बुसान :यो फिल्ममा पनि भाइरसको संक्रमणले प्रभाव पारेको देखाइएको छ । यो दक्षिण कोरियन फिल्ममा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो देखाइएको छ ।